Ny sehatra ecommerce haingam-pandeha ho an'ny Desktop sy finday | Martech Zone
Saturday, May 14, 2016 Alahady, May 15, 2016 Douglas Karr
Speed is vola. Tsotra toy izany raha resaka e-varotra. Tsy ny mpanjifa ihany no mandao ny tranokalanao rehefa tsy mahavita be amin'ny desktop na finday. Ny toeran'ny motera fikarohana sy ny hafainganana haingam-pandeha ihany koa. Ny motera fikarohana dia tsy maniry ny hahasorena ny mpampiasa rehefa mitsidika tranokala miadana izy ireo, noho izany dia tsy misy ilana ny fametrahana azy ireo tsara.
Raha miadana ny tranokalanao e-varotra na manana traikefa mahantra amin'ny mpampiasa finday ianao, dia mety hamela vola be eo ambonin'ny latabatra. Ny sarety fiantsenana nilaozana dia mitentina $ 4 trillion isan-taona amin'ny tranokala ecommerce, ary iray amin'ireo antony mahazatra indrindra amin'ny fialana amin'ny sarety fiantsenana dia ny hafainganam-pandeha miadana.
Raha ny marina, 87% amin'ireo mpampiasa no mandao ny fizotry ny fizahana fizarana 7 segondra na mihoatra ary ny tahan'ny fandaozana dia mitombo 30% isaky ny 2 segondra mandritra ny fizotry ny fizahana.
Ny varotra finday dia mitombo 300% haingana kokoa noho ny orinasa. Ka zava-dehibe ny fisafidiananao ny sehatra ecommerce mifototra amin'ny hafaingan'ny faingany amin'ny finday. 66% ny fotoana laniana amin'ny fiantsenana dia vita amin'ny alàlan'ny #mobile ary 82% amin'ireo mpampiasa mampiasa finday rehefa mandray fanapahan-kevitra momba ny fividianana
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy miankina amin'ny lampihazo foana izy io. Ny tambajotra famindrana sary, ny cache, ary ny tambajotra fanaterana atiny dia mety hisy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandehan'ny tranokalanao ihany koa - tsy lazaina intsony ny famolavolana ny lohahevitra na ny modely anao. Ny lohahevitra tsy dia tsara natao amin'ny sehatra tsy mampino dia mbola hiteraka olana. Ary ny fanatsarana haingam-pandeha sy ny fitaovana matanjaka amin'ny sehatra miadana kokoa dia mety hihoatra ny mpifaninana aminao.
Selfstartr dia namoaka ny valin'ny fampitahana an-doha ny tranokala ecommerce hanehoana ny salanisan'ny tsirairay, antsoina hoe Miala amin'ny latabatra ve ny sehatra ecommerce-nao? Ka sehatra iza avy no nivoaka ambony? Afaka mankany amin'ny azy ireo ianao lahatsoratra sy fisintomana ny famakafakana feno. Heveriko fa nahavita asa feno izy ireo.
Hafainganana sy fahombiazan'ny sehatra Ecommerce lehibe
Hafainganana amin'ny fametrahana ecommerce - 3D Cart, Big Cartel, Shopify, SquareSpace Ecommerce, ary BigCommerce.
Google Score Speed ​​Page - Pejy ao amin'ny 1 & 1, Big Cartel, CoreCommerce, UltraCart ary Shopify.
Fitsapana ho an'ny finday Google Mobile - Ecommerce SquareSpace, BigCommerce, CoreCommerce, Shopify ary Woo Commerce.
Google Mobile User Experience - Ecommerce SquareSpace, BigCommerce, Woo Commerce, Shopify ary ePages amin'ny 1 & 1.
Ny sehatra Ecommerce haingana indrindra amin'ny Desktop sy Mobile
Tags: Sarety 3daabacocartel lehibeBigCommercesarety66corecommercecoupofysehatra ecommercefampisehoana sehatra ecommercesehatra e-commerceepagessehatra ecommerce haingana indrindragetelasticjigoshopvoasarimakiranamagentosarety misokatrasarety faratamponyPrestaShopradwareselfstartrshopifysparkpayecommerce efamiraultracartvolutionvarotra woowoocommercewp ecommercex-ny hovidiana
27 Desambra 2016 à 3:30
b********* – 3dcart fast – ru miving me – efa nampiasa azy rehetra aho ary io angamba no miadana indrindra eto Etazonia